caag silikoon - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
caag silikoon waa caag ah oo silsilad weyn ee ka kooban yahay Silicon iyo oxygen atamka sidoo kale, iyo sida caadiga ah waxaa jira laba kooxood oo organic ku xiran atamka Silicon. Waxay leedahay wanaagsan iska caabin ah heerkulka hoose iyo weli ma sii shaqeyn karaa -55 ℃.
Waxaa jira siyaabo badan oo kala saarista caag silicone. Sida laga soo xigtay foomka ka hor daaweynta, waxaa loo qaybin karaa heerkulka qolka caag silicone vulcanized, heerkulka sare caag silicone vulcanized. Sida laga soo xigtay monomer loo isticmaalo, waxa loo qaybin karaa vinylalkohol methyl caag silicone, methyl vinylalkohol phenyl caag silicone, fluorosilicone, caag silicone nitrile iyo wixii la mid ah. Oo sida kala duwan ee waxqabadka iyo isticmaalka, waxaa loo qaybin karaa nooca guud, heerkulka super yar yahay nooca adkaysta, heerkulka nooca adkaysi super sare, nooca xoog sare, nooc u adkaysta saliid, nooca caafimaadka iyo wixii la mid ah.
Talinaynaa qalabka wax soo saarka la isku qurxiyo, LXQLF Taxanaha Multi-function Triple usheeda dhexe fiicni, Taxanaha LXQLFQ Hagaajiyey Multi-function Triple usheeda dhexe fiicni, taxane LXXJB fiicni Planetary, Taxanaha LXDLH awood Planetary fiicni,